အမျိူးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဘုံသဘောထားကို အခြေခံပြီး (၂၁) ပင်လုံတွင် အဓိကထားဆွေးနွေးမည် - Burma News International
မေလ ၂၄ ရက်မှ ၂၈ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပမည့် (၂၁) ရာစုပင်လုံ အစည်းအဝေးတွင် အမျိူးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှရရှိလာသော ဘုံသဘောထားများကို အခြေခံပြီး အဓိကဆွေးနွေးသွားကြမည်ဟု CNF လက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး(၃) ပူးထက်နီကပြောသည်။
“အမျိူးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကနေ ဘုံသဘောထားရရှိချက်တွေကို ပင်လုံမှာတင်ပြသွား မှာဖြစ်တယ်၊ အဲဒီအခြေခံအောက်မှာ ကျနော်တို့ဆွေးနွေးမယ် အဲဒီအတွက်က UPDJC လုပ်ငန်း ကော်မတီက အစည်းအဝေးထိုင်တယ် အဲဒီမှာကျနော်တို့သဘောထား တွေ ပြန်ပြီးတော့စုစည်းတယ် အဲဒါကို ပင်လုံမှာချပြမှာဖြစ်တယ်’’ ဟု ပူးထက်နီကပြောသည်။
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ( UPDJC) ကို အစိုးရ၊လွှတ်တော်၊တပ်မတော်တို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ စသည့် အစုအဖွဲ့ သုံးခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး အမျိူးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေး ပွဲအသီးသီးမှ တင်ပြလာသော ဘုံသဘောတူညီချက်များကို ပြန်လည်စုစည်းကာ (၂၁)ပင်လုံ ဒုတိယ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြမှာဖြစ်သည်။
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင်လုံ ဒုတိယ အစည်းအဝေးတွင် ချင်းအမျိူးသား တပ်ဦး CNF မှ ကိုယ်စားလှယ် ၁၉ ဦး ကိုယ်တက် ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး ပါဝင်သင့်ပါဝင်ထိုက်သူ ၂ ဦး၊ တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ် ၂ ဦး နှင့် နည်းပညာ အထောက်အကူ ၄ ဦး တို့တက်ရောက်ြ ကမည်ဖြစ်သည်။
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင်လုံ ဒုတိယ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်မည့် ချင်းအမျိူးသားတပ်ဦး CNF မှ ကိုယ်စားလှယ်အမည်စာရင်းများ
1. Dr. Lian Hmung Sakhong (Vice Chairman- 2)
2. Pu Thang Ning Kee (VCM-3)
3. Salai Thla Hei (General Secretary)
4. Dr. Sui Khar (AGS-1)
5. Pu Thet Ni (AGS-3)
6. Pu Ralhnin Hlawnceu (CEC)
7. Pu Rokhawma (CEC)
8. Col. Solomon (CEC)
9. Pu Paul Sitha (CEC)
10. Pu Ram Kulh Cung (CEC)
11. Pu Bawi Lian Mang (CEC)
12. Salai Biak Pum (CEC
13. Col. Biak Ling (CC)
14. Pu Thang Yen (CC)
15. Pu Lalramlawma (CC)
16. Pi Nleng Kee (CC)
17. Pi Cing Zam Vung (CC)
18. Pi Lalhmangaihzuali (CC)
19. Pu Vung Za Khai
1. Rev. Tluang Ceu
2. Pu Thang Shing
1. Pu Nai Thoung
2. Pu Victor Biak Lian
1. Nancy Dawt Chin Sung (Logistic Incharge)
2. Capt. Khin Mg Lay (Documentation)
3. Lt. Pan Tui ( PSO)
4. Lt. Sui Uk (Security)
More in this category: « လေမြိုမြစ် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း အကောင်ထည်ဖော်မည် ကို ဒေသခံများစိုးရိမ်နေကြ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွင် ဒေသခံပြည်သူများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လိုအပ်ကြောင်း ချင်းပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်ဆို »